5 Dzakanakisa Nzira Semalt SEO Zvishandiso uye Webhu Inongedza Kunatsiridza Webhusaiti Yako Zvita
Iwe uri muridzi webhizinesi diki, chitoro chepamhepo, kutanga-up, freelancer, kana munyori anga achiedza kuti webhusaiti yavo iverengerwe kwenguva yakareba uye usati uine rombo rakanaka kusvika zvino?
Wanga uchitsvaga nyika yeSEU nhevedzano yekusabatwa zvisina kunaka, izvo zvisingaite musoro uye zviri kupedza nguva yako yakawanda uye kushanda nesimba?
Zvakanaka, hausi wega!
Kuwana yako webhusaiti kuiswa ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvekuita bhizinesi pamhepo, uye kuve nechokwadi chekuti webhusaiti yako inoonekwa pane yekutanga peji reGoogle inofanirwa kuve yezvinhu zvako zvekutanga.
Maererano nekuongororwa, 95% ye online traffic inofamba kuenda kumawebhusaiti ayo anoonekwa pane yekutanga peji reGoogle, uye chete 5% inotambirwa nemapeji anotevera.
Zvino, usati iwe wafunga kuti mutambo uyu wapera, kuwana yako saiti kuiswa haisi iyo yakaoma iyo. Zvinongoda moyo murefu uye kuzvipira kwenguva refu. PaSemalt, isu tinonzwisisa kuti chikuru chunk yenguva yako inopedzerwa uchimhanyisa bhizinesi rako uye kutonga zvese zvekutakura basa zvinouya nazvo.
Ndokusaka tagadzirisa edu SEO zvishandiso uye Webhu Webhusaiti maseti kwete kuti chete kukubatsira iwe kukwirira pamusoro paGoogle, asi zvakare kukupa iwe kuwana data rakakosha uye manhamba nezvevanhu vanoshanyira webhusaiti yako. Nekufamba kwenguva, urwu ruzivo runogona kukurudzira sarudzo dzebhizimusi rako, kukubvumira kuti utore maitiro emutengi nekuona zvavanoda zvakanyanya uye pakupedzisira wovhara zvimwe zvibvumirano.
Ivo vanhu vari shure kweSemalt vakashanda vasinganeti uye nechido mukukudza aya maturusi e SEO kubva kumakore eruzivo. Ngatitarisei zvakanyanya kuti Semalt SEO zvishandiso uye Webhu Webhusaiti maitiro angakubatsira iwe uye bhizinesi rako kubudirira.
Nzira shanu dzeSemalt SEO Zvishandiso uye Webhu Analytics Kuvandudza Yako Webhusaiti Zvita
1. Webhusaiti Optimization:
Semalt inopa yakakwana webhusaiti masevhisi ekubatsira iyo webhusaiti yako kuti ive yepamusoro, pasina simba, uye nyore nyore mukutsvaga injini seGoogle . Webhusaiti yakagadziridzwa inogovana zvakanaka nema metric senge inorema organic traffic, huwandu hwenguva inoshandiswa pane webhusaiti, uye uine yakaderera bounce rate, izvo zvinoreva kuti huwandu hwevanhu vanoshanyira saiti yako uye vanobva vangobva. Chikwata chedu cheSEO nyanzvi chinotungamira kune yako webhusaiti zvido nekugadzira SEO uye webhu optimization chirongwa chinokwezva vatengi vakawanda uye chinobatsira kupuridzira bhizinesi rako mberi.
Kuve nechokwadi chekuti webhusaiti yako mitoro nekukurumidza ndechimwe chinhu chakakosha chewebhu optimization. Kana zvichitora saiti yako zvinotora kupfuura 3 masekondi kuti mutoro, kune yakanyanya mukana mukana wevashandisi kushungurudzika uye kusiya.
Izvi zvakadzama zvinodzora inouya traffic pamwe nehuwandu hwekudzoka, nekudaro zvinokanganisa maitiro ako webhusaiti. Semalt SEO zvishandiso inova nechokwadi chekuti webhusaiti yako yakagadzirisirwa zvakanaka kuti isangane nezvose zvinokurudzirwa uye inoteerera zvakakwana kuti isashanda pane ese mairi uye nharembozha / mahwendefa sezvo kupfuura 50% ye traffic traffic online inowanikwa yakagadzirwa kuburikidza nemafoni chete.
Kubudirira kwewebhu webhu kunoreva kuti vashanyi vako vachange vaine ruzivo rwakanaka rwevashandisi pavanoshanyira webhusaiti yako, zvichivaita kuti vadzoke uye vadzitarise nguva zhinji mune ramangwana.
2. Keyword Kutsvaga
S emalt's AutoSeo masevhisi anosanganisira ekuya kudzika kiyi yekutsanangura kweiyo chinangwa chako niche, pane peji peji optimization, kubatanidza-kuvaka, uye yakazara webhu analytic mishumo iyo yese yakagadzirirwa uine chinangwa chimwe mupfungwa: kubatsira webhusaiti yako kukwira kumusoro kweGoogle SERPS.
Asi kuti uwane chinzvimbo, yako ingangodaro traffic inoda mirayiridzo uye zvinoratidza zviratidzo zvepo saiti yako kuti asvike kwauri. Unoisa sei izvi zviratidzo kuti ivo vasvike kwauri?
Huye, kuburikidza neshoko rekutsvagisa izwi! Ichokwadi kuti hapana-brainer. Nekuti isu ngativei vakatendeseka, nehuwandu hwevashandi vanopfuura mabhiriyoni matatu pamhepo, webhusaiti yako yakafanana nehove diki mugungwa rakakura. Semalt inogona kukubatsira kuti uchinje izvozvo.
Keyword research ndiyo hwaro hwe yakanaka SEO, uye kunyatsoziva kuti ndeapi mazwi makuru ekuisa mune izvo zvaunotumira online hazvitsanangure kwete chete chinzvimbo chako, asi yako iri kuuya traffic, webhu optimization, uye zvimwe zvakawanda.
Kunyangwe iwe uri kushambadzira chigadzirwa chitsva, sevhisi kana iwe pachako, kugadzira mamiriro ezvinhu kunokosha, uye kutsvaga mazwi akakosha anokodzera mamiriro ezvinhu ndiyo nzira yega yekuona kuti webhusaiti yako inosvika kuvanhu vazhinji.
Kunyangwe iwe uchifanira kushandisa mazwi mapfupi mazwi kana marefu-muswe mazwi akakosha, kana kuti iwe unongoda kuti uone kuti iyo nhamba yakakodzera yenguva yekutaura zita rakakosha, Semalt AutoSEO haingogone kupindura mibvunzo iyi chete kwauri asiwo kubata basa racho zvakare. . Iwe unogona kutaura zvakanaka nekunetseka nekuita keyword research yewebsite yako uye nekuvimba kuvimba naSemalt kubata iro basa iwe munehunyanzvi.
3. Zvekunyora Zvemukati:
Takataura pamusoro pekutsvagurudza kwemazwi nekushandiswa kwakaringana pamusoro, asi kutsvaga mazwi hakusi iko kwekupedzisira-chinangwa. Maitiro aunoshandisa aya mazwi akakosha uye kunyora zvirimo zvinotaura kune vateereri vako ndizvo zvichange zvichisarudzira chinhu pakuchengeta kwemushandisi.
Iwe unobata sei mushandisi wako hanya, kuendesa dambudziko ravo uye mhinduro pasina simba, uye kuenzanisa zvavanotarisira?
Kunyora zvemukati inyanzvi, uye kwete wese munhu munyori akazvarwa. Nezvakataurwa, zvisinei, hazvireve kuti haugone kudzidza kugadzira zvine simba, zvakajeka, zvine mutsindo, uye zvine ruzivo rwemukati.
Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti kana zvasvika kune SEO, "vanhu vanouya kutanga," uye kana iwe uchinge wanzwisisa izvo, zvinova nyore kunyora izvo zvichaita kuti vashanyi vako vapinde uye varambe vachidzoka.
Kunyora zvemukati kunorevawo kuti haurwadzire vashandisi vako nezvakawanda zvekudzokorora mazwi izvo zvinogona kutsamwisa uye zvinoita kuti vashandisi vanzwe kuraswa. Iwe urikunyorera kugadzirisa dambudziko ravo, kwete kugadzira imwe.
Zvemukati hazvifanirwe kungova zvinonakidza kune vateereri vako chete asi zvakare kuve nehuwandu hwekugadzirisa dambudziko ravakauyira. Kana ikasazadzisa chero chimwe chezvinhu izvo zvinodiwa, huwandu hwevashanyi vanodzoka hahuzove huri kuwedzera.
Semalt's proactive yezvinyorwa zvekunyora timu ine hunyanzvi muhunyanzvi hwavo uye inogona kubatsira yako saiti kuwedzera pamwe nekuchengetedza inouya uye inodzoka traffic.
Parizvino, tanga tichitaura nezvenzira dzese dzeSemalt SEO maturusi anogona kubatsira webhusaiti yako kuwanikwa, zvisinei, kana iwe usinayo imwe ikozvino, usanetseka. Semalt haisi kungogadzirisa nzvimbo dziripo chete, asi zvakare inokudziridza mazano uye zviratidzo mumawebhu anoshanda, kubva pakatanga.
Munguva yepadigital yatinogara mairi, webhusaiti inoita sephotefolio, inotangazve, uye iyo yekumira shopu yeruzivo rwese rwaunoda kubva kune chero bhizinesi. Kuita chokwadi chekuti chiri kushanda, chinonakidza, chinodzidzisa, uye chakanyatsogadzirwa chakafanana nekugadzira chekutanga panguva yekutengesa.
Semalt inopa inokwanisa timu yevagadziri vewebhu vanoziva iyo ins uye kunze kwemawebsite. Kubva pakukudziridza E-commerce zvitoro kusvika mukubata zvigadziriso manejimendi, timu yedu ichapa SEO webhu kuvandudza masevhisi anobatsira bhizinesi rako kubudirira.
Nekubatanidzwa kwakakwana kweese mato SEO uye matekiniki, yako webhusaiti ichave yakarongedzwa yepamusoro pasina nguva.
5. Web Wewebhu
Chekupedzisira, imwe nzira yakakosha Semalt inobatsira kugadzirisa yako webhusaiti ndeyekupa analytics kuburikidza neSemalt keyword chinzvimbo cheki uye Web Analyzer kuti ugare pamusoro pezvazvino maitiro.
Iyo analyzer inoratidza kuti webhusaiti yako yakaiswa papi paGoogle Search Injini yekutsvaga peji uye inopa mazwi anogona kubatsira kukurudzira yakanangwa SEO kukurudzira. Iwe zvakare unofanirwa kutarisa kuti mumakwikwi ako ari kuita sei uye tsvaga kuti chii chiri kuvashandira.
Analytics yakakosha zvakanyanya kuti iite sarudzo dzemangwana dzine chekuita nekushambadzira uye dzakanangidzirwa SEO mishandirapamwe iyo isingazounze iko kutsva vatengi vatsva asiwo kunatsiridza chinzvimbo. Semalt inokupa iwe pamwe nehungwaru hwese hwaunoda iwe hwauchazoda kuita izvo sarudzo pamwe nezano reunyanzvi pakutora matanho anotevera.
Webhu Analytics masevhisi naSemalt mutambo-chinja kana zvasvika kune yako SEO mishandirapamwe.
Ndivanaani Vanogona Kubatsirwa neSemalt SEO Zvishandiso Uye Webhu Analytics?
Iye zvino, kana iwe uri kufunga kuti ndiani anogona kubatsirwa kubva kune Semalt SEO zvishandiso uye webhu analytics, mhinduro pfupi ndeye chero munhu uye wese munhu ane onlineapo.
Mhinduro refu, kune rumwe rutivi, ndeye chero muridzi webhizinesi, muzvinabhizimusi, makambani einiche, kana vapi vamiriri vevashandi vanofanirwa kutengesa hunyanzvi hwavo online uye vanoda peji rekutora yevateereri vavanoda.
Kunyangwe iwe uri munyori mune zvehutano uye mararamiro, kana bhuku reodha anoda nyaya, kana tech tech anofarira kuongorora zvigadzirwa zvitsva zvikuru mumusika, Semalt SEO zvishandiso zvinogona kubatsira webhusaiti yako kusvika vakawanda vateereri pasi rose.
Kwete chete iwe unowana yakarongedzerwa nzwisiso yako niche, asiwo zvimwe zvese zviwanikwa munzvimbo imwechete, izvo zvimwe iwe ungadai waifanirwa kutsvaga wega.
Saka, kana iwe uri kutsvaga kuwedzera bhizinesi rako repamhepo kana kuti uchida kutengesa zvigadzirwa zvako zveyakagadzirwa kuburikidza newebhusaiti yako, Semalt achakudzosera kumashure uye ave nechokwadi chekuti webhusaiti yako inogadziriswa zvakakwana neSEO, uye bhizinesi rako richabudirira kwemakore mazhinji richimhanya.
Semalt ndiye wese-anotenderedzwa SEO yakazara-stack yedhijitari yekushambadzira mutengesi iyo inotora bhizinesi rako repamhepo mberi. Kunyangwe iwe uri kutsvaga webhusaiti yekuvandudza, webhu kuvandudza, analytics, kana kungoda kubatsirwa kugadzira zvemukati zvakanangwa zvizere nemazwi akakosha, ingo taurirana nesu.
Izvo zvishandiso uye masevhisi anopihwa naSemalt achave nechokwadi chekuti webhusaiti yako inogovaniswa kumusoro kweGoogle. Nenzira iyi, iwe unoramba uri nhanho imwe pamberi pemakwikwi ako uye uwane yakawanda organic traffic kuti uwedzere mari.
Semalt ine mapakeji akasiyana erudzi rwese rwemuridzi bhizinesi; kunyangwe iwe uchida AutoSeo, FullSEO, Web Development kana Webhu Analytics, taura neboka redu nhasi kuti uone kuti chii chinoshanda zvakanyanya iwe nebhizinesi rako, kuitira kuti isu titange rwendo rwekuita kuti webhusaiti yako ibve pasi pamwe chete.
Analytics yakakosha zvakanyanya kuti iite sarudzo dzemangwana dzinoenderana nekutengesa uye dzakanangidzirwa SEO mishandirapamwe iyo isingazounze iko kungokwevera vatengi vatsva chete asiwo kunatsiridza chinzvimbo zvakare.